सर्वोच्च बारका अध्यक्ष र सचिव बाहेक अरुले बोल्न नपाउने हो ? - Kantipath.com
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष र सचिव बाहेक अरुले बोल्न नपाउने हो ?
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको आकस्मिक बैठकले मिडियामा अध्यक्ष र सचिव मात्रै बोल्न पाउने, अरुले बोलेमा ठीक नहुने भन्दै निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि बितण्डा भएको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सदस्य तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले यस्तो दाबी गर्दै सामाजिक संजालमा निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले कमेन्टमा उनको दाबी झुटो भएको भन्दै खण्डन गरेका छन् ।
शाक्यले, ‘अनन्तको कुरा भ्रामक छ । त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन’ लेखेका छन् । फेरी शाक्यलाई प्रतिउत्तर लेख्दै लुइंटेलले भने, ‘सरी टु से सरः लिखित निर्णय नभएको हो । व्यक्तिगत रुपमा बोल्न नपाईने, बोलेमा कारबाही गर्ने र मिडियालाई कारबाही सम्मको कुरा उठेको छ ।’
डा. रामहरी त्रिपाठीले यो निर्णयमा गम्भिर असहमति भएको बताएका छन्। काठमाडौं फर्के पछि नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने उनले बताए । सधै जुम मिटिंग हुनेमा आज भौतिक उपस्थिति भन्नुको कारण यसो पो र छ ! उनी भन्छन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माग गरेको एमीकस क्युरीमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाश केसीलाई पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको मंगलबारको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय घिमिरे र केसीलाई एमीकस क्युरीका लागि सर्वसम्मतिले चयन गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासले जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई-दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमीकस क्युरी झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
Previous Previous post: सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ : बहुमत जाँच्ने थलो संसद हो !
Next Next post: विजया स्टिल कम्पनीकाे बिलेट गाडी लाखाैकाे भन्सार छलि नेपाल प्रवेश प्रहरीकाे नियन्त्रण पश्चात भन्सार चलान